FAQs - FUZHOU MIN-TAI MACHINERY CO., LTD
Eny, izahay dia orinasa matihanina mitarika ary miavaka amin'ny milina fanodinana atody miaraka amin'ny traikefa fanamboarana efa ho 16 taona. Manome mialoha ny varotra, amidy ary aorian'ny fivarotana serivisy ho an'ny mpanjifa nasionaly sy iraisam-pirenena.
Ny vidiny notononinay dia mifanaraka amin'ny fangatahanao momba ny fikirakirana ny milina, homenay anao ny tolotra tsara sy tsara indrindra raha vao manamafy ny rafitry ny milina ianao.
Ny fotoana itarihana dia manodidina ny 30 andro ho an'ny milina tokana, fa ny fotoana mitarika manokana dia mila hamafisina manokana ho an'ny tsipika famokarana namboarina na ny vahaolana amin'ny milina.
Ny fomba fandoavam-bola dia matetika ataon'ny T / T mialoha na L / C amin'ny fahitana.
Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Masinina fonosana atody, Masinina manendaka atody nandrahoina, Masinina manasokajy sy milina fanangonana, Hatching atody Packer, Mpanamboatra masinina mamaky atody,